1. Inokwenziwa kwiimilo ezahlukeneyo ezintsonkothileyo, ukuchaneka komgangatho ophezulu.
2. Ukuqhagamshelana nomlilo ngokuthe ngqo, akukho vumba kunye neegesi eziguquguqukayo kumaqondo aphezulu
3. Amandla aphezulu omatshini, ukuchasana nokuhamba kwegesi.
4. I-shrinkage ephantsi, i-conductivity ephantsi ye-thermal.
5. Amandla agqwesileyo kwiqondo lokushisa eliphezulu kunye nokuzinza kwe-thermal.
I-porcelain crucible inokuma i-1050 ℃, isetyenziswa ngokubanzi kwisicelo sobushushu obuphezulu:
1. IMetal Processing
2. Ukunyibilika kweglasi
4. Ukucocwa kwamatye anqabileyo kuShishino lwezacholo
5. Ibhubhoratri kunye nezixhobo zokuhlola
6. Uhlalutyo lwe-thermal
I-porcelain crucible isetyenziswa kakhulu kwindawo enomhlwa kunye nobushushu obuphezulu njengamandla obushushu. Ezinye iintlobo kunye neemilo nazo zinokulungiswa ngokwemizobo yabathengi, ubungakanani kunye nemfuneko yokusebenza.
Ukunyibilika kunye nokuvavanya
Icala leplanga, iipalati, njl.
Amaqhekeza angama-50,000 ngenyanga
Isampuli yamahhala, nceda unakekele ukuthunyelwa
Imbali:Siyinkampani edityaniswe ne-R&D, imveliso kunye nokuthengisa ngokupheleleyo,
I-Refractory Crucible Gold Annealing Crucible